ZayYarHlaing: Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင်
Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင်
Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင်....
Youtube Videos တွေကို Download လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်...။
အခုပြောမှာကလည်း နည်းထဲက တစ်နည်းပါပဲဗျာ...
မထမဦးဆုံး Download လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ် Download လုပ်မဲ့ Youtube Videos ကို ဖွင့်ထားပါခင်ဗျာ..ပြီးရင် Menu Bar က Bookmarks ကို နိုပ်...
Bookmarks This Page (or) Bookmarks Toolbar ကို Right-Click နိုပ်ပြီး
New Bookmarks ပေါ်လာရင် Name မှာ ကိုယ် Videos ရဲ့ နာမည် ဒါမှမဟုတ် နာမည်တစ်ခုခုပေးပြီး Location မှာ ဒီ Code နှစ်ခုထဲက ကြိုက်တဲ့ Code တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Add ကိုနိုပ်လိုက်ပါ...
နောက် ခုန Bookmarks ကို ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင် ဒီလိုလာမယ်..
အဲ့မှာ Open With ပဲဖြစ်ဖြစ် Save As ပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးပြီး OK ကိုနိုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီခင်ဗျာ..။
ဒါပေမဲ့ Windows Media Player နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးခင်ဗျာ..။
flv ဖိုင်ဖြစ်နေလို့..Windows Media Player နဲ့ ဖွင်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဒီ K-Lite Codec Pack Full 4.3.8 Beta ကို Download လုပ်လိုက်ပါ.. ။
K-Lite Codec Pack Full 4.3.8 Beta ကို Download လုပ်လိုက်ရင် flv ဖိုင်တွေကို Windows Media Player, Windows Media Center, WinAmp, VLC, Media Player Classic နဲ့ အခြား video player တွေ့နဲ့ဖွင့်လို့ရပါပြီ.........။
Posted in Computer by Zay Yar Haling
0 comments: to “ Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Download လုပ်ချင်ရင် ”
U Lun Gywe: A Master Painter From Myanmar
Starting blog with Wordpress
Firefox မှာ Youtube Videos တွေကို အလွယ်တကူ Downloa...
အခမဲ့ရနိုင်တဲ့ email လိပ်စာများစာရင်း...
Serial Keys တွေ Crack File တွေ Cover တွေကို ယူကြရေ...
ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဖိုင် ကိုရှာတဲ့ Software...
English - Myanmar - English Online အဘိဓာန်...(၁)
Myanmar-English-Myanmar Online အဘိဓာန်...(၂)
English - Myanmar ဖောင့်များ....
Internet သုံးထားတဲ့အတွက် မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်တဲ...
Password တွေကို ရှာပေးတဲ့ Software...
Partition ချတဲ့ Software...(၁)
Partition ချတဲ့ Software....(၂)
Partition ချတဲ့ Software....(၃)
MP4 လုပ်တဲ့ Software တွေ
Powerpoint ကနေ DVD ကိုပြောင်းပေးတဲ့ Software...
Video ဖိုင်တွေဖွင့်တဲ့ Software.
WAV မှ MP3 ပြောင်းပေးတဲ့ Software
ပုံတွေကို Album အလိုက်ပို့လို့ရတဲ့ Software.
DVD ထဲက သီချင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့ Software.
DVD ထဲက သီချင်းတွေ ဖြတ်တဲ့ တောက်တဲ့ Software..(၂)
ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှ မှားဖျက်မိသော ပုံများကို ပြန်ရှာ...
မြန်မာ E-books တွေ.
Adobe ရဲ့ Photoshop နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tool တွေလေ့လာစရ...
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာနဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ...
Gtalk Shortcut များ
ကျော်မယ် ၊ ခွမယ် ဆိုရင်..
Blog တွေရဲ့စာရင်းကို ရှာချင်ရင်.
Print Screen ဖမ်းတဲ့ Software
Windows ကို မထိစေပဲ ဖိုင်တွေကို ဖျက်တဲ့ software
Gtalk က အသံကို ဖမ်းပေးတဲ့ software
Software တွေ အစုံဆုံးနေရာ
Hard Disk ကိုသွေးသစ်လောင်းတဲ့ software
Window ကို မပါစေပဲ Hard Disk ကိုဖျက်တဲ့ software
ကွန်ပျူတာ အကြောင်း ဘာထူးလဲ..(PC World)
Special zawgyi download for Blog
နိုင်ငံများရဲ့ ကုတ်ကို သိချင်ရင်
ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း
blog နှင့် I T နည်းပညာ
ကိုယ့်ပုံလေးတွေနဲ့ Logo / Icon လေးတွေလုပ်ချင်ရင်
မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန်နေရာ
Photoshop လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ
ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး website..တွေကို ရှာရန်
ကျော်ကြမယ် ... ခွကြမယ် ။
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ...
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ
သရဏဂုံ တည်ခြင်း အကျိုး
ပါရမီ (၁၀ ) ပါး
ဘုရားဂုဏ်တော် ( ၉ ) ပါး
Bleach...The Death & The Strawberry.
Internet Browser's and Plugin's
ဖြစ်နိုင် / မဖြစ်နိုင် ???
Shwe Dagon Pagoda - I'm just sharing